चितवन पुगेर ओलीले प्रचण्डलाई यतिसम्म भनेपछि देउवा नै तनावमा - jagritikhabar.com
चितवन पुगेर ओलीले प्रचण्डलाई यतिसम्म भनेपछि देउवा नै तनावमा
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा खुट्टा तान्ने दलहरु प्रधानमन्त्रीका सहयात्री बनेर खुट्टा तान्न थालेको भन्दै सर्तक हुन आह्वान गरेका छन् ।
१०औं महाधिवेशन उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उद्घाटनका वेला प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अतिथिका रुपमा वोलाएर आलोचना नगर्ने बताउँदै खुट्टा तान्नेसँग सतर्क रहन आग्रह गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न खोज्दा पनि सहयात्रीबाट साथ नपाइरहेको पनि बताए ।
ओलीले चितवनमा हुने पार्टीको १० औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न कसैलाई नरोक्ने बताएका छन् । आफूसँग अरूले प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि केही फरक नपर्ने उनले जनाएका छन् । ‘मसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा लोकतन्त्र होचिँदैन । प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ,’ उनले बुधबार बालकोटस्थित निवासमा कान्तिपुरसँग भने ।
अध्यक्षमा फेरि उठ्ने औपचारिक घोषणा गरिनसकेका ओलीले आफूले पार्टीको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने ‘आम साथीहरूको’ धारणा रहेको उल्लेख गरे । ‘म उठें भने भरसक सर्वसम्मत होला । मैले सहमति गरौं, मलाई निर्विरोध छोडिदिनुहोस्, तपाईं अध्यक्षमा नउठिदिनुहोस् भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘म कसैलाई दबाब दिन चाहन्नँ । कसैले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा मैले दबाब किन दिने ?’
आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेले मतपरिणामबारे भने ख्याल गर्नुपर्ने ओलीको भनाइ छ । ‘कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्यो भने परिणाम के हुन्छ, सबलाई थाहा छ । त्यसमा खाली पार्टीको इमेज र युनिटीलाई कमजोर देखाउने अथवा पार्टीभित्र प्रतिपक्ष छ भन्ने देखाउने कुरा मात्र हुन्छ,’ उनले थपे ।
पार्टीभित्र फरक मत राख्नेप्रति कुनै पूर्वाग्रह नरहने उल्लेख गर्दै उनले एमालेमा पूर्वमाओवादी र ‘१० भाइ समूह’ नरहेको दाबी गरे । ‘अब १० भाइवाला कुरा केही छैन । कुनै साथीले बोलेको छ भने त्यो उसको निजी कुरा हो । तपाईंहरूलाई यो भ्रम नरहोस् कि भीम रावलले बोलेको कुरा १० भाइको कुरा होइन,’ उनले थपे ।
महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्दा नेता व्यवस्थापनभन्दा देशलाई सही बाटोमा लैजाने नीति महत्त्वपूर्ण हुने बताए । ‘हाम्रो पार्टीको कामको अभिभारा भनेको नेताहरूको व्यवस्थापन होइन, देशलाई सही बाटोमा लैजाने हो । देशको राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा लैजाने हो । शान्ति स्थिरता र स्थायित्वको बाटोमा लैजाने हो र देश विकास गर्ने हो,’ उनले भने ।
केन्द्रीय पदाधिकारी संख्या बढाउने सम्भावनालाई उनले अस्वीकार गरे । ‘पदाधिकारीको संख्या कसैको आकांक्षा हेरेर होइन, आवश्यकता हेरेर निर्धारण हुन्छ । मान्छेका आकांक्षा हेर्‍यो भने सबैको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुने होला । अध्यक्ष हुने आकांक्षा भए चुनाव लडेर आए भयो,’ उनले स्पष्ट गरे, ‘वास्तवमा हुनुपर्ने एक/एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव हो ।’
आगामी संसदीय चुनावमा उनले कुनै पार्टीसँग तालमेल नगर्ने तर चुनावपछि सरकार निर्माणमा भने गठबन्धन हुन सक्ने संकेत गरे । । ‘राजनीतिक दलहरू आआफ्नो ढंगले, स्वतन्त्र ढंगले चुनाव लडून् । आफ्नो जनमत कस्तो छ ? जनताको विश्वास कति छ थाहा पाऊन् । यदि एकल सरकार बनेन भने मिलिजुली सरकारको प्रावधान छ,’ उनले थपे, ‘हामी आफू–आफू चुनावमा गएर जनमत लिएर अघि बढौं भन्ने मान्यता हो । एक पटक मोर्चा बनाएर अभ्यास गर्‍यौं । अब, चुनाव एक्लै स्वतन्त्र ढंगले लड्छौं । हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस छ । अरू अब चुनावी तालमेल गरिरहनुपर्ने हैसियतका छैनन् ।’
सरकारले संविधानसम्मत तरिकाले निर्वाचन घोषणा गरे ‘अर्ली इलेक्सन’ मा समेत भाग लिने बताए । ‘नेपाली कांग्रेस किन तयार भएन ? अहिले पनि हामी चुनाव घोषणा गर, हामी तयार छौं भन्छौं । अरू तयार छैनन् । पटक–पटक संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन गरेको कांग्रेसले हो । अहिलेचाहिँ बीचमा चुनावमा जान हुँदैन भन्छ,’ उनले भने, ‘संविधानसम्मत चुनाव हुनुपर्छ । संविधानसम्मत ढंगले निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा हामीलाई जुनसुकै निर्वाचन अघि आओस्, पछाडि आओस्, केही छैन । हामी सामना गर्न तयार छौं । निर्वाचन चाहिएको छ । जनादेश चाहिएको छ । परमादेशबाट बनेको यो यन्त्र–सरकारको सकेसम्म छिटो अन्त्य हुनुपर्छ देशको हितका लागि । त्यसका लागि छिटो चुनाव हुनुपर्छ । हामी अर्को प्रकारको गठजोडबाट सरकारमा जाने मनसाय केही राख्दैनौं । चुनावको प्रतीक्षामा छौं ।’